» खड्गो टरेपनि जोखिममुक्त किन छैनन् प्रधानमन्त्री?
दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण
खड्गो टरेपनि जोखिममुक्त किन छैनन् प्रधानमन्त्री?
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०८:४३
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सकिएको खवर सार्वजनिक हुनासाथ उत्साह छायो सबैतिर। उनको प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सक अस्पतालको ‘अपरेशन थिएटर’बाट बाहिरिएर मुस्कुराए, हात हल्लाए।
तर सामाजिक सञ्जालदेखि अस्पताल परिसरमा भेला भएका शुभचिन्तकको बधाईको ओइरो लाग्दै गर्दा ती चिकित्सकले निचोडमा भने, ‘हामी उत्साहित हुन अझै कम्तीमा पाँच दिन धैर्य गर्नुपर्छ।’
महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीको जोखिमयुक्त मिर्गौला प्रत्यारोपणको खड्गो टरेपनि पनि उनी खतरामुक्त भइनसकेको र उनले अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सक बताउँछन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएका अनेक संक्रमणका असर, निको भइनसकेका केही रोग, हालै गरिएको ‘एपेण्डिसाइटिस’को शल्यक्रिया र उमेर मिर्गौला प्रत्यारोपणको सफलताका लागि सबैभन्दा धेरै जोखिम मानिएको छ
ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपणमा संलग्न प्रोफेसर डा. पवनराज चालिसे भन्छन्, ‘आजका लागि ठूलो खड्गाे पार भएको छ। नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालेको छ।’
डा. चालिसे थप्छन्, ‘तर जीउले मिर्गौलालाई फाल्दिन सक्छ । त्यस्तो नहोस् भनेर शरीरको प्रतिरोध क्षमता घटाउन औषधि चलाएको छ । तर त्यो औषधिले शरीर कमजोर बनाउँछ । कमजोर शरीरमा भाइरस या ब्याक्टोरियाले छिट्टै आक्रमण गर्न सक्छ । त्यसैले हामी कसैलाई पनि भेट्न दिन्नौँ केही दिन दाताबाहेक ।’
उनका अनुसार त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सावधानी भने अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
त्यो जोखिमबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुक्त राख्न अस्पतालका डा. चालिसेसँगै दर्जन बढी चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीको परिवार नै जुटेको छ । बिरामी अवस्थामा समेत चिकित्सक खटिएका छन्।
ओली देशका प्रधानमन्त्री भएपनि अस्पतालभित्र छिरेपछि चिकित्सकका लागि अन्य सामान्य बिरामी जस्तै थिए। तर, उनको उपचार शतप्रतिशत सफल पार्नुपर्ने चौतर्फी दबाबले तनावमा रहेका चिकित्सकले अग्निपरीक्षा जस्तो दायित्व निर्वाह गरेका छन् ।
यसअघि ओलीको एपेण्डिसाइटिसको शल्यक्रिया सफल भएलगत्तै दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीस्वरुप उनको विशेष जाँचले निरन्तरता पाएको थियो ।
तर, ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि भारत, सिंगापुर या अमेरिका जाने योजनालाई पन्छाउँदै नेपालमै प्रत्यारोपण गर्ने निर्णय गर्दा प्रत्यारोपणमा १२ वर्षदेखि सफल हासिल गर्दै आएका यहाँका चिकित्कले पनि दबाब महसुस गरे ।
त्यो स्वाभाविक पनि थियो, देशकै प्रधानमन्त्री अस्पतालमा भर्ना हुँदा । त्यसमाथि हालसम्म ६ सय वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा ३ दशमलव ५ प्रतिशत मृत्युवरण गर्नु परेको अस्पतालको तथ्यांक छ । त्यसैगरी १५ प्रतिशतमा विभिन्न संक्रमण फैलिएको छ। र, हालसम्म १० जनाको मात्र दोस्रो पटक सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ।
डा. चालिसे भन्छन्, ‘अस्पतालमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल हुँदा जस्तो गर्व आज लागेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली जोखिममुक्त भइसकेपछि मात्रै हामीले उत्साहित हुनेछौँ ।’
अन्य शल्यक्रिया जस्तै प्रत्यारोपणमा पनि ‘टिम वर्क’ अत्यावश्यक हुन्छ । ओलीको उपचारका हकमा पनि त्यो लागू भयो । खासगरी ओलीकी निजी चिकित्सकद्धय प्रोफेसर डा. दिब्यासिंह शाह र प्रेमराज ज्ञवालीको सल्लाहमा सोमबार साँझ ओली अस्पताल भर्ना भएदेखि
प्रत्यारोपणभन्दा पहिलेको समय महत्वपूर्णसँगै जटिल थियो । त्यो बीचमा ओलीको दाँत, फोक्सो, मुटुदेखि लिएर स्नायु स्वास्थ्यबारे पटकपटक जाँच गरेर त्यसको रेकर्ड राखियो । व्यवस्थापनको पाटो चुस्त बनाए अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेमराज खड्गा नेतृत्वको कर्मचारीले ।
मंगलबार डायलासिस गरियो, ज्वरो लगायतबाट बचाइयो । तयारीलाई परिपक्व बनाउन बुधबार बिहान ९ बजे पूर्वनिर्धारित शल्यक्रियाको समयलाई आधाघण्टा पर धकलियो । ओलीको शल्यक्रियामा संलग्न डा. प्रेमराज ज्ञवाली भन्छन् ‘हामी हतार गर्नुभन्दा गम्भीर बन्नुलाई सफलता ठान्छौँ।’
त्यसपछि दाताबाट सकुशल मिर्गौला झिक्ने र बिरामीमा सकुशल प्रत्यारोपण गर्ने चुनौतिपूर्ण काम बाँकी थियो । ओली र उनकी भान्जी समीक्षा संग्रौलाको हकमा त्यो सफल भएपछि चिकित्सकहरुले लामो श्वास फेरे, कारण यो अन्य बिरामीको भन्दा जटिल शल्यक्रिया भएकाले जोखिम यथावत थियो ।
डा. चालिसेका अनुसार करीब साढे ४ घण्टामा ओलीमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको काम सकियो । प्रत्यारोपणको शतप्रतिशत सफलताका लागि ओलीको चाहनामा भारतबाट आएका डा. अनन्तकुमार र दिनेश खुल्लर पनि सक्रिए भए । ओलीको होश केही मिनेटमै आयो र उनलाई अस्पतालमा हालै निर्माण गरिएको स्तरीय लिभर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको आईसीयुमा सारियो । दाता समीक्षालाई भने मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको आईसीयुमा सारियो ।
ओलीको अद्भूत आत्मविश्वासदेखि चिकित्सक नै छक्क
रोग र उपचारको सफलतामा बिरामीको आत्मविश्वास पनि महत्वपूर्ण मानिने चिकित्सकले भन्दै आएको कुरा हो । तर डा. चालिसे भन्छन्, ‘हामी अच्चममा परेका छौँ प्रधानमन्त्रीको मनोबल देखेर । गोपनीयताका कारण उहाँलाई लागेका रोगको नाम भन्न मिल्दैन । उहाँले खाने औषधिको सूची लामो छ । तर उहाँको आत्मविश्वास उस्तै छ ।’
ओलीले प्रत्यारोपण पहिले एक जना चिकित्सकसँग जिस्किएका थिए, ‘तपाईंहरु आत्तिनु भएको त छैन नी । मलाई त शतप्रतिशत निको हुन्छु भन्ने लाग्छ है।’
यसो त ओलीले अस्पताल भर्ना हुनुअघि दिएको भिडियो सन्देशमा पनि ‘देशलाई अलपत्र पारेर म अलप हुन्न’ भन्दै दरिलो आत्मविश्वास प्रकट गरेका थिए ।देशसंचार डटकमबाट